Taliyaha Ciiddamadda Boliiska oo markii ugu horeysay ka hadlay Amaanka Muqdisho – idalenews.com
Taliyaha Ciiddamadda Boliiska Somalia Gen: Saacid, ayaa waxa uu markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in Taliska aysan u dul qaadan doonin Falalka lagu waxyeeleynaayo Ammaanka iyo Xasiloonida Magaallada Muqdisho.
Gen: saacid ayaa sheegay in ay dhameeyeen qorsho uu sheegay in wax looga qabanaayo falalka lidika ku ah Amaanka Magaalada Muqdisho, isagoona Tilmaamay in Dowladda ay Talaabo sharci ah ka qaadi doonto Ciddi isku dayda inay qorshahaasi is hortaagto.
Dhanka kale, Taliyaha waxa uu si rasmi ah u shaaciyay in dadka qalqal galinaaya Ammaanka dartood aan wado dambe loo xiri doonin dadna aan loo dhibaatay doonin.
Waxa uu sidoo kale, Kooxda Xagjirka ee Alshabaab ugu baaqay inay nabadda qaataan, isla markaana ka shaqeeyaan danaha dadka oo muddo 22-sanno ku dhex jiray dagaalo.
Si kastaba ha ahaatee, Saraakiisha Ammaanka ayaa waxa ay dhowr mar ku celceliyeen in ay wax ka qabanayaan amaanka waloow ay weli wadooyinka magaalada muqdisho ugu muhiimsan ay ka macnuucan yihiin gawaarida BL-ka.
Ciidamada Kenya oo maanta dagaalo kulul kala kulmay Xoogaga Shabaab